Andraikitra mpanatanteraka mangatsiaka sy mafana: inona no vinanin'izy ireo mialoha? | Fiofanana kognitive
Andraikitra mpanatanteraka mangatsiaka sy mafana: inona no vinanin'izy ireo amin'ny hafa?
Fantatra ankehitriny ary fantatry ny besinimaro fa ny fiasan'ny mpanatanteraka dia mifamatotra akaiky (miaraka amin'ny faharanitan-tsaina) amin'ny lafin-javatra maro amin'ny fiainantsika: manana angon-drakitra momba ny fahaizany maminany momba ny fanatanterahana akademika, creativeness, fahaizana mamaky teny ary ny mahatakatra ny sary, amin'ny fahaiza-manao matematika, to fiteny ary ny rehetraherisetra.
Matetika anefa, amin'ny famakafakana ny vokatry ny fiasan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny lafin-javatra lehibe eo amin'ny fiainantsika, ny fikarohana dia miompana indrindra amin'ilay antsoina fiasa mangatsiaka, izany hoe ny "kognité" kokoa ary tsy misy fihetseham-po (ohatra, ny fitadidiana miasa, fahalalahana ara-pahalalana sy fanakanana); kely kokoa ny fiteny fa tsy ny antsoina hoe fahefana mpanatanteraka mafana, izany hoe ireo izay miompana amin'ny tanjona hitarika ny fanapahan-kevitsika (indrindra raha tototry ny lafiny fihetsem-po sy manentana), fifehezana ny fihetsem-po, ny fitadiavana fahafaham-po ary ny fahaizana mampihemotra azy ireo .
Amin'ny taona 2018, Poon noho izany dia nanapa-kevitra ny hizaha toetra ny andian-jatovo manoloana ny fianarany any an-tsekoly sy ny momba ny fiadanany ara-tsaina sy ny fahaizany mampifanaraka; Mandritra izany fotoana izany, ireo adolantsento ireo dia niharan'ny fanombanana ireo anjara andraikitra mpanatanteraka, na ny hatsiaka na ny mafana, amin'ny alàlan'ny bateria manokana.
Inona no nipoitra avy tamin'ny fikarohana?
Na eo aza ny nolazain'ny mpanoratra tao amin'ny lahatsorany manokana, ny fitsapana rehetra natao hanombanana ny hatsiaka (fanaraha-maso, fanakanana ny fahatsiarovan-tena, ny fahaizan'ny kognita ary ny drafitra) ary mafana (fanapahan-kevitra) saika tsy nifandray na nifandraisany (ny fifandraisana avo indrindra, ary iray monja hahatratra ny haavon'ny dikany statistika, dia r = 0,18!); io dia ahafahantsika mieritreritra (hypothèse), mifanaraka amin'izay noresahin'i Miyake sy ireo mpiara-miasa aminy, fa ireo singa samihafa amin'ny asan'ny mpanatanteraka dia tsy azo ifanarahana.
Ny lafiny iray tena mahaliana dia azo antoka fa, avy amin'ny fitaoman'ny sehatra ara-tsaina, asan'ny mpanatanteraka mangatsiaka dia naminany mialoha ny fanatanterahana akademika raha mbola fiasan'ny fahefana mpanatanteraka voaporofo fa maminavina mialohafampifanarahana ara-tsaina.
Ny asan'ny mpanatanteraka mangatsiaka sy mafana, na dia miasa synergistika aza, avy eo toa fananganana roa samy hafa ary misy lanjany hafa manoloana ny toe-piainana isan-karazany.
Ary farany, tahirin-kevitra manamarika hafa dia miompana amin'ny fironan'ny isa amin'ny fitsapana nampiasaina tamin'ity fikarohana ity, hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 17 taona: ny fitadidiana miasa am-bava mampiseho fitomboana mitohy amin'ny taona (amin'ny ambaratonga heverina amin'ity fikarohana ity), ary mampiseho fitomboana haingana manodidina ny 15 taona; koa ny fanaraha-maso miseho amin'ny fitomboana tsy tapaka amin'ity sokajin-taona ity; Ery fahaizana mizaha toetra toa mitombo hatrany hatrany hatramin'ny 16 taona; toy izany koa, ny fahaizana inhibition mampiseho fiakarana mideza avy amin'ny 13 ka hatramin'ny 16; Ery planningfarany, mampiseho fitomboana mitohy amin'ny taona izy io, ary mampiseho tampon'izany fiakarana eo amin'ny 17 taona izany.
Hafa mihitsy ny fironana fiasan'ny fahefana mpanatanteraka satria ny fironana manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 taona dia miendrika lakolosy (na "U" mivadika); amin'ny teny hafa, manodidina ny 14-15 taona eo ho eo, fahitana ratsy kokoa no hita (amin'ity fikarohana ity) raha ampitahaina amin'ny taona teo aloha sy manaraka; Ny marimarina kokoa, amin'ity sokajin-taona ity dia misy fironana bebe kokoa amin'ny risika sy ny fikatsahana fahafaham-po kely nefa eo noho eo (raha ampitahaina amin'ireo lavitra lavitra amin'ny fotoana fa lehibe kokoa).
Ho famaranana ...
Mikasika ny asa mangatsiaka ataon'ny mpanatanteraka, ny fanakanana, ny fahatsiarovana miasa ary ny fahaizan'ny kognita dia toa matotra kokoa noho ny amin'ny drafitra; noho izany dia azo heverina fa ny teo aloha (fototra kokoa) no fototry ny fampandrosoana ny farany (amin'ny baiko ambony).
Raha ampitahaina amin'ny lahasa mpanantanteraka mafana, ny lamina "U" nivadika dia afaka manazava ny fitomboan'ny fironana amin'ny fitondran-tena mety hitranga matetika amin'ny fahatanorana.
Amin'ny ankapobeny, ny fitsapana ho an'ny asan'ny mpanatanteraka mangatsiaka sy ireo ho an'ireo birao mpanatanteraka mafana dia toa mandrefy ny fandaminana samy hafa: ny teo aloha, raha ny marina, dia toa mifandraika kokoa amin'ny fanatratrarana tanjona "kognitif" kokoa (ohatra, ny fahombiazan'ny sekoly), ity farany dia mifandraika bebe kokoa amin'ny tanjona ara-tsosialy sy ara-pihetseham-po bebe kokoa.
Ny fahitana mitambatra bebe kokoa momba ny asan'ny mpanatanteraka dia ilaina noho izany, matetika loatra tsy mandanjalanja fotsiny amin'ireo singa betsaka kokoa hatsiaka.
Inona no atao hoe fahefana mpanatanteraka?
"Fandaharam-potoana" andraikitra mpanatanteraka: ny vokatry ny Coding momba ny drafitra sy ny fanakanana any amin'ny preschool
Ny fifandraisana misy eo amin'ny intelligence sy ny fluid miasa
Mahatonga anao ho hendry kokoa ve ny fanaovana mozika?
Ny asan'ny mpanatanteraka izay maminavina ny zava-bitan'ny sekoly
Ny asany sy ny famonoan'olona: asa inona?
Ny fifandraisana misy eo amin'ny asan'ny mpanatanteraka sy ny fiteny amin'ny vanim-potoanan'ny preschool
Ny fifandraisana misy eo amin'ny famoronana, ny faharanitan-tsaina ary ny fahefana mpanatanteraka
Hamafisina ny asan'ny mpanatanteraka am-pianarana
Ny fahaiza-miaina mora foana sy ny fahaiza-manao matematika
"Milalao" miaraka amin'ny lahasa mpanatanteraka. Amin'ny fahafinaretana dia mihatsara ianao
Ny asan'ny mpanatanteraka izay milaza mialoha ny fahatakarana soratra sy ny hafainganana haingana
Fitsaboana ny asan'ny mpanatanteraka am-pianarana - fizarana 1
Miasa Cold executive: Alzheimer's vs. dotika frontotemporal
Miyake, A., Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A., & Wager, TD (2000). Ny firaisankina sy ny fahasamihafan'ny asa fanatanterahana sy ny fandraisany anjara amin'ny lahasa «frontal lobe»: Famakafakana miovaova latent. Ny psikolojika kognitif, 41(1), 49-100.
Poon, K. (2018). Fiasan'ny mpanatanteraka mafana sy mangatsiaka amin'ny fahatanorana: fampandrosoana sy fandraisana anjara amin'ny valim-panomboana lehibe. Birao eo amin'ny psikology, 8, 2311.
asan'ny mpanatanteraka, fiasan'ny fahefana mpanatanteraka, andraikitra mpanatanteraka sy fampifanarahana ara-tsaina, andraikitra mpanatanteraka sy fahombiazan'ny akademika, fiasa mangatsiaka, anjara asa mangatsiaka sy mafana
Andraikitra mpanatanteraka mangatsiaka sy mafana: inona no vinanin'izy ireo amin'ny hafa?2021-08-232021-08-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/funzioni-esecutive-fredde-e-calde.-cosa-predicono-di-diverso-tra-loro.jpg200px200px
"Fandrafetana" asan'ny mpanatanteraka: ny vokatry ny fanaovana kaody amin'ny fandrindrana sy ny fanakanana amin'ny vanim-potoana fianarana
Ankizy fanomezana: manavaka ny asan'ny mpanatanteraka sy ny faharanitan-tsaina
Inona no atao hoe fluite semantika (ary maninona no ampiasaina)
Torohevitra mahasoa ho an'ny "gymnastics" ao an-tsaina: Cognitivefun
Ny fifandraisana misy eo amin'ny intelligence sy ny fluid miasaLahatsoratra, Function Executive, Function Executive, Intelligence